Dhaqan-xumada: 13 astaan oo lagu garto goob shaqo oo sumeysan
Home Aragti-doon Dhaqan-xumada: 13 astaan oo lagu garto goob shaqo oo sumeysan
Xafiis sumeysan: Waxaad uu dhan waa sida xabad tufaax ah oo hallaabay
Waxaad uu dhan waa sida xabad tufaax ah oo hallaabay. APACE
Waxay u badan tahay inaad in ka badan 40 saacadood ku qaadato xarunta shaqada, isbuuc kasta.
Haddaba, haddii goobta aad ka shaqeyso ay tahay meel dadkeedu xun yihiin oo xanta, is lug-goynta, fashilinta shaqada, iyo siyaasad hoosaadka ay ku badan yihiin – waxay kugu sababi karaan in jahwareer iyo walbahaar ay kugu dhacaan.
Waxaa suuragal ah in dhibaatooyiinka dhanka maskaxda ee ka dhasha ay xitaa kula dhaafaan meelo ka baxsan xafiiska. Sababtoo ah 40 saacadood aad ayey u badan tahay.
Maalin kasta shaqada maka baxdaa adigoo dareemaya daal iyo niyad jab? Ma soo toostaa adigoo u baqaya waxa maalintaa aad la kulmi doonto? Ma dareemeysaa in aad u baahan tahay shaqo kale oo degdeg ah ka hor inta aysan xaaladda xumaan? Haddaba, haddii HAA ay tahay jawaabta, way cadahay in meel xun aad ka shaqeyso.
Haddii dadka aad la shaqeyso ay xun yihiin waxay hoos u dhigtaa hal-abuurka shaqo iyo howlkarnimada qofka, waxayna sababtaa niyad jab xun oo keena ay xafiiskaa ama shirkadda ay fashilanto.
Maxay tahay xarun shaqo oo sumeysan?
Goob shaqo oo sumeysan waa meel six un u saameyneysa caafimaadkaaga, kuguna abuureysa walwal iyo cabsi.
Waxaa lagu gartaa, xanta, dagaalka, is qasbidda, khalkhal-gelinta, khiyaanada iyo xadgudub u dhaca si joogto ah.
Haddaba halkan ka akhriso astaamaha waaweyn ee aad ku ogaan karto in goobta shaqo ay tahay meel xun, xitaa maalinta ugu horeysa ee aad tagto:
Wada xiriirka iyo wada hadalka oo aad u liita
Waxaa suuragal ah in aad ogaato isbedello xafiiska ka socda oo horeyna aanan looga wada hadlin ama shaqaale loo dirayo howl aan jirin iyo wax aan heerka shaqada gaarsiisneyn.
Ama shaqaalaha oo aan su’aalaha loo baahan yahay is weydiineyn, aanna sidoo kale raadineyn xogta loo baahan yahay. Iyo dad kooxo kala ah oo is xamanaya.
Waxaas oo dhan waxay calaamad cad u yihiin goob shaqo oo xun ama qalafsan. Waxaa arrintaas ka dhasha in natiijada shaqada ay xumaato, la iskuna eedeeyo iyadoo aysan jirin cid masuuliyadda qaadeysa.
Ma jiro qof faraxsan ama niyad wanaagsan
Sida caadiga ah, qof kasto kama farxiso shaqada. Waxaa jiro dad markasta si xun u arka howl kastoo la qabto ama qof kasta oo guul gaara.
Balse goobta shaqada ee sumeysan waxay kaga duwan tahay, waxaa ku badan xumaanta iyo xanta. Mararka qaar waxaa joogto ah in qof kasta uu dareemayo niyad jab.
Sheekooyiinka goobta shaqada dhex socda waxay ku kooban yihiin farxad la’aanta iyo jahwareerka haysta qof kasta oo ka mid ah shaqaalaha.
Wararka xanta ah oo duul-duulaya
Ma maqashaa xan iyo hadallo kutiri-kuteen ah oo duulaya meesha shaqada gudaheeda iyo bannaankaba? Ma maqashay in shirkadda ay ku dhowdahay dhaqaale la’aan?
Xanta iyo wararka kale, mararka qaar waa suuragal, balse Balse haddii ay gaarto heer uu qof kasta xanto midka kale, uusanna hortiisa ka dhihi Karin hadalka – Markaas waa xilliga ay dhibaatada jirto.
Hadallo xadgudub ah ama gef ah oo aad maqasho
Haddii qofka madaxda ah ama shaqaalaha gudahooda ay is handadayaan – si toos ah ama si dadban – oo hadallo la isku tuurayo, Waxaad markaas kuu muuqaneysa in goob sumeysan aad ka shaqeyneyso.
Xadgudubka melena ugama bannaana goob kasta oo shaqo. Sidoo kale marna looma dulqaato xadgudub – adiga ama qof kale ha lagu sameeyo – ha ogolaan weligaa.
Waxaa socdo isbedello aad u badan
Haddii dadka dadka aysan goobta ka shaqeyneyn in ka badan hal sano – oo shaqada laga ceyrinayo ama iyaga ay iska tagayaan ama shaqooyiin kale loo bedelayo – Haddaba meel wanaagsan kama shaqeysid ee ogow taa.
Qof madax ah oo dhib badan
QOfka madaxda kuu ah ma dalabaadkiisaa badan? Ma wuxuu abaalmariyaa dadka hadalkiisa ogolaado oo keli ah?
Ma fahamsano miyaa heerka shaqada oo ma wuxuu dejiyaa xeerar dhaafsiisan kuwa dhabta ah ee shaqada? Weligii kuma qanco shaqada aad qabato ama dadka kale ay qabtaan miyaa?
Ma wuxuu dadka u diraa shaqo aan kala cadeyn, ka dibna dadka maku qabsadaa sababta loo qaban waayay?
La shaqeynta qof madax ah oo isla saxan, dhib bandanna, waxaa ka dhasha qalalaase guud oo dadka oo dhan saameeyay iyo wada shaqeyn la’aan ba’an.
Dad sheeganaya guusha qof kale
Haddii qof aad isla shaqeysaan uu sheegto guusha shaqo uu sameeyay qof kale oo wax kaalin ah uusan ku lahayn, taas waxay dhaawac wayn ku noqoneysaa wada shaqeynta xafiiska iyo howlkarnimada dadka kale.
Sidoo kale waxay dhaawaceysaa koboca xirfadeed ee asxaabta wada shaqeysa oo dhan, aar ahaan adiga.
Dad wada shaqeeya oo hadana aan is caawineynin
Ma dareentaa in shaqada aysan ahayn mid dadka ka wada dhexeyso balse qof kasta uu tiisa uu diiradda saarayo?
Haddii dadka aad isla shaqeysaan ay si joogto ah ugu guul dareystaan in ay is caawiyaan, oo adigana keligaa lagugu eegto qabashada howsha laguu diray, oo aad si keli ah u dareemto dhibaatada – Taasi waa goob sumeysan ee iska jir.
Qof ba midka kale ayuu ku eedeynayaa guuldarada
Waa mid ka mid ah arrimaha ugu xun eek a dhaca goob shaqo oo sumeysan, dadkeedana is neceb yihiin: Haddii wax ay qaldamaan, markasta qof uun waa in lagu eedeeyo, halkii ay ka ahaan lahayd mid la wada leeyahay guuldarada.
Laakiin haddii hal qof la saaro eeda, shaqadana laga ceyriyo ama la ganaaxo; taas waxay dhaaweceysaa kalsoonida shaqaalaha.
Markasta shaqo ayaad ku jirtaa … Markasta
Xitaa marka aad fasax ka qaadato shaqada, xitaa haddii aad xanuunsan tahay ama xitaa markaad aroos ku jirto – Waxaa markasta lagaa filayaa shaqo in aad qabato.
Meeshaas waxaa ka maqan isu dheelitirnaanta shaqada iyo nolosha caadiga ah ee qofka. Taas waxay dhaawac ama dhibaato u geysan kartaa caafimaadka jismi ama maskax.
Haddii fasaxaaga aadan si fiican u qaadan Karin, hadaba waxaad ka shaqeysaa goob aad u xun.
Waxaa jiro koox is beheysatay
Ma jiraan koox gaar ah oo is beheysatay – xitaa aan ka mid ahayn madaxda sare – oo go’aanada u gaara xafiiska ama shaqada kala qeybiya? Ma dareemeysaa in eex iyo shaqaaleysiinta qaraabada ay meesha ka jiraan?
Taas wexey calaamad u tahay in colaadin iyo dhibaato aad kala kulanto goobtaas shaqo haddii aad sii joogto – waa haddii aadan ka mid ahayn dadka loo eexanayo ama qaraabada.
Xadgudub u gaar ah dumarka
Sida lagu ogaaday baaritaan, 10 ka mid ah 100 kii haween ee meel ka shaqeeyo, waxay la kulmaan xadgudub uu kufsi ka mid yahay.
Mararka qaar waxaa lagula kacaa xadgudub dhanka xirfadeeda ah – Haddaba, haddii gabdhaha la isku deyayo in la xodxoto iyadoo dalacsiin loo ballan qaadayo, waxay taa caddeyn dhab ah u tahay in goob sumeysan aad ku sugan tahay.
Faquuq iyo kala sooc jinsiyadeed
Ha ahaato dhibaato loo geysto curyaanka, jinsiyadda, da’da iyo xitaa dabaqadda (faqiir iyo taajir) dadka loo kala saarayo – Goobtaas waa meel ay halis iyo dhibaato ka soo socdaan.
Previous articleSi fudud waxkasta ma u ilawdaa? Tijaabi qaababkan ee xoojinta xusuusta
Next articleCudurada dhimirka ee qof kasta ku dhici kara